iRise Hub waa xaruntii ugu horreysay ee bulshada ku salaysan bulshada, Muqdisho. Waxaanu nahay goob furan oo loogu talagalay ganacsatada Soomaaliyeed, kuwa cusub ee horumarinta, horumarinta, maalgashadayaasha, teknoolajiyada iyo bulshooyinka bilowga, si ay ula wadaagaan fikradaha, isku xiraan oo ay iskaashi u wadaagaan. Waxaanu siinnaa jawi shaqeynaya oo u saamaxaya xubnahayaga, iyada oo la heli karo barkadeena xirfadlayaal xirfadeed iyo
Waxaan nahay nadaamka dabiiciga ah oo bixiya meel wada shaqeyn ah oo loogu talagalay ganacsadaha iyo bilawga, iyo qayb ka mid ah furitaanka qorista fikradaha cusub iyo hal-abuurka. Shaqadeenu waxay u dhaxaysaa uur-ku-dhalinta fikradaha, kobcinta, hagitaanka, is-fiilinta iyo ugu dambeyntii waxay ku dhexjiraan suuqa. Waxaanu siinnaa xubnahayaga si aan u helno hubkayaga cusub ee ay ku kobcin karaan, dhisaan oo ay iskaashi u yeeshaan fikraddooda iyaga oo leh shakhsiyaad isku mid ah. Waxaanu nahay tiirar furan fikradahaaga bilowga iyo fursadaha.